အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့၏ မြန်မာပြည်သိမ်းပိုက်ရေး စီမံချက် (စ-ဆုံး) | မျိုးမြန်မာ
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့၏ မြန်မာပြည်သိမ်းပိုက်ရေး စီမံချက် (စ-ဆုံး)
Posted by myomyanmar on April 21, 2014
Posted in: ဘင်္ဂလီအရေး.	Tagged: ဂျီဟပ်, Islam Fraternal Society.	Leaveacomment
ရန်ကုန်တိုင်း ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အခြေစိုက် (Islam Fraternal Society) အစ္စလာမ်ညီညွတ်ရေးအသင်းမှ မြန်မာမွတ်ဆလင် အဖွဲ့ချုပ်ထံသို့ (Islam Dom in Myanmar) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သိမ်းစီမံချက်ဆိုပြီး စားတမ်းတစောင်ကို တင်းသွင်းထားကြောင်း။ ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာမွတ်ဆလင် အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြကြောင်း။ အစ္စလာမ်ဘာသာအတွင်းသို့ အဓမ္မသွတ်သွင်းခံထားရပြီး အစ္စလာမ်ညီညွတ်ရေးအသင်းနှင့်နီးစပ်သည့်မျိုးချစ် မြန်မာအမျိုးသမီးများထံမှ သိရပါသည်။
ယင်းပြည်သိမ်းစီမံချက်တွင် မဟာဗျူဟာ (၁၀)ခုနှင့် နည်းဗျူဟာ(၁၀)ခုပါဝင်ပြီး အလွန်ယုတ်မာ၍ အန္တရာယ်ကြီးမားသော စီမံချက်များဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ံ
မွတ်ဆလင်တို့၏ မြန်မာနိုင်ငံပြည်သိမ်းစီမံချက် မဟာဗျူဟာ (၁၀)
၁။ ၉၆၉ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများအား အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရန်။
၂။ ဥပဒေပြုရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးအာဏာအား ချုပ်ကိုင်ထားရန်။
၃။ မြန်မာအမျိုးသားထု တစ်ရပ်လုံးကို လူဦးရေ မတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
၄။ စီးပွားရေး ဂျီဟာဒ်လုပ်ရန်။ ၅။ နိုင်ငံရေး ဂျီဟာဒ်လုပ် ရန်။
၆။ လူဦးရေ ဂျီဟာဒ်လုပ် ရန်။
၇။ မီဒီယာ ဂျီဟာဒ်လုပ် ရန်။
၈။ အပေါ်အောက်၊ အတွင်းအပြင် ပူးပေါင်းကြံစည်ရန်။
၉။ မြန်မာများအား သပ်လျှိုသွေးခွဲရန်။
၁၀။ အင်တာနက် ဂျီဟာဒ်လုပ်ရန်။
နည်းဗျူဟာ (၁၀)ခု ————————
(၁) ၉၆၉ ဦးဆောင် ဆရာတော်များအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန်။
(၂) သံဃာ ဂိုဏ်းခွဲရန်။
(၃) ၉၆၉ တရားပွဲများသို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ မသွားလာရဲအောင် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန်။
(၄) ၉၆၉ လူငယ်များအားတွေ့ရာ သင်္ချိုင်းဓါးမဆိုင်းပဲ သတ်ဖြတ်ရန်။
(၅) ၉၆၉ အဖွဲ့များနှင့် အယောင်ပြ ဆွေးနွေးရန်။
မဟာဗျူဟာ အမှတ်(၂)အတွက် နည်းဗျူဟာများ။
(၁) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မဟုတ်သူ တရားစီရင်ရေး အာဏာပိုင်များနဲ့ဥပဒေပြုလွတ်တော်အမတ်များအား ငွေနှင့်ပေါင်း၍ အိပ်ကပ်ထဲ ထည့်ထားရန်။
(၂) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တရားရေးအာဏာပိုင် များများမွေးထုပ်ရန်။
(၃) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဥပဒေပြုလွတ်တော်အမတ်ဦးရေ တိုးပွားရေးလုပ်ရန်။
(၄) နိုင်ငံတော်ဥပဒေများတွင် ရှရီးအာသ်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။
(၅) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးကောင်းသားများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရှေ့နေမများ၊တရားသူကြီးမများအား အကွက်ချ၍ လက်ထပ်သိမ်းသွင်းရန်။
(၁) ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ပြီး ယင်းဝက်များအား ဓါတုဆေးဝါးများထိုးသွင်း၍ မြန်မာများအားရောင်းချရန်။
(၂) ကွမ်းယာထဲတွင် ပန်းသေခြင်း။ သားသမီးမရခြင်းတို့အားဖြစ်စေမည့် ဓါတုဆေးများသုတ်လိမ်း၍ ရောင်းချရန်။
(၃) မုန့်ပဲသွားရေစာများကို အထည်အလိပ်ဆိုးဆေးများ ထည့်သွင်း၍ မြန်မာများထံသို့ ဈေးပေါပေါနှင့် ထုပ်လုပ်ရောင်းချရန်။
(၄) မြန်မာဆင်းရဲသားရပ်ကွက်များတွင် စတုဒီသာများ(အချိန်ကာလကြာမှဒုက္ခပေးမည့် ဓါတုဆေးဝါးများထည့်သွင်း၍)ကျွေးမွေးရန်။။
(၅) ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ခင်းများ စပါးခင်းများဝယ်ယူ၍ ဓါတ်မြေသြဇာနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများ အဆမတန်သုံး၍စိုက်ပျိုးရန်။
(၆) အထက်ဖော်ပြပါစားစရာများအား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာဆင်းရဲသားများထံသို့ ဈေးချိုချိုနှင့် ရောင်းချရန်။
(၇) ယင်းစားသောက်ဖွယ်ရာများကို မွတ်စလင်များ မဝယ်ယူမိအောင် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို နည်းလမ်းရှာဖွေရန်။
မဟာဗျူာအမှတ်(၄) အတွက် နည်းဗျူဟာများ။
(၁)ပြည်တွင်းတွင်း မွတ်စလင်ကုမ္ပဏီကြီးများ တည်ထောင်ရန်။
(၂) Oreedooဖုန်းကုမ္ပဏီ ကဲ့သို့သော ပြည်ပမှမွတ်စလင်ကုမ္ပဏီကြီးများ မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့ အရေအတွက်များများ ဝင်ရောက်နိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။
(၃) အဓိကကျသည့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် အစ္စလာမ်ကုမ္ပဏီကြီးများမှ ဈေးကွက်ဝေစု အများစုရယူထားရန်။
(၄) ယင်းကုမ္ပဏီများတွင် မြန်မာများကို အလုပ်မခန့်ရန်။
(၅) အစ္စလာမ္မစ် လုပ်ငန်းများထူထောင်နိုင်ရန်အတွက် အကြီးစားအစ္စလာမ္မစ်ဘဏ်များ ဖွဲ့စည်းရန်။
(၆) မြန်မာကုမ္ပဏီများတွင် ထိပ်တန်းနေရာများတွင် မွတ်စလင်များ နေရာယူထားနိုင်ရေးအတွက် အင်အားတောင့်တင်းသော ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရှိရန်။
(၇) မြန်မာကုမ္ပဏီများတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ရာထူးကြီးမားသူ မွတ်စလင်များက မြန်မာများအား အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ ရာထူးလစာ မတိုးပေးရန်။ မွတ်စလင်ဝင်တို့ကိုသာ ခန့်ထားရန်။
မဟာဗျူဟာ အမှတ် (၅) အတွက် နည်းဗျူဟာများ။
(၁) မွတ်စလင်အမတ်ဦးရွှေမောင်ကဲ့သို့ အစ္စလာမ္မစ်သူရဲကောင်းများ လွှတ်တော်တွင် ဦးရေများပြားလာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
(၂) လက်ရှိပါတီကြီးနှစ်ခုတွင် အစ္စလာမ္မစ်အကျိုးတော်ဆောင်များ ထည့်သွင်းရန်(သို့မဟုတ်) အစ္စလာမ္မစ်အရေး ဦးစားပေးသူများ ပံ့ပိုးထားရန်။
(၃) ဒီမိုကရေစီအမည်ခံ အစ္စလာမ္မစ်ပါတီများ ထူထောင်၍ မွတ်ဆလင်ဦးရေများသော မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်။
(၄) မြန်မာမွတ်ဆလင်များ၏ အရေးနှင့်စပ်လျှက် မြန်မာအစိုးရအား နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ဖိအားပေးလာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
(၅) OIC ထံမှ အကူအညီများရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
(၆) ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရေး အလေးပေးဆောင် ရွက်ရန်။
(၁) မြန်မာတို့၏ အခါကြီးရက်ကြီးများတွင် လူစည်ကားရာနေရာများ၌ အကြီးစားဖောက်ခွဲမှုများပြုလုပ်ရန်။
(၂) မြန်မာအမျိုးသမီးများအား လက်ထပ်သိမ်းပိုက်ပြီး ကလေးများများမွေးရန်။
(၃) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ မွတ်ဆလင်များကို မြန်မာပြည်တွင်းသို့ များများသွင်းရန်။
(၄) အဓိကရုဏ်းများတွင် မြန်မာငါးယောက်ကို တစ်ယောက်တည်းနှင့် သတ်ဖြတ်နိုင်သော အစ္စလာမ္မစ်ကာကွယ်ရေးအင်အားစုများအား မြို့နယ်ကျေးရွာဒေသအလိုက် ဖွဲ့စည်းထားရှိရန်။
(၁) မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တို့၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများအား ကမ္ဘာကပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ သိရှိလာစေရန် ဆောင်ရွက်ရန်။
(၂) ပဋိပက္ခများအတွင်း အပြစ်မဲ့ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့် မွတ်ဆလင်များ၏ မိသားစုဝင်များအား အင်တာဗျူးပြုလုပ်၍ ကမ္ဘာ့သတင်းဌာနကြီးများသို့ ပေးပို့ရန်။
(၃) Black Journalism နည်းလမ်းများဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအစိုးရအသီးသီးမှ မြန်မာများအား လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သူများအဖြစ်ရှုမြင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
(၄) ပြည်တွင်းမီဒီယာလောကအား ငွေဖြင့်လွမ်းမိုးထားရန်။
(၅) အစ္စလာမ္မစ်နေ့စဉ်သတင်းစာ(သို့မဟုတ်) အပတ်စဉ်ဂျာနယ်ထုပ်ဝေနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်။
(၁) အစ္စလာမ္မစ်လူကြီးများမှ ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေး ဟန်ပြပြုလုပ်ရန်။
(၂) လူငယ်များမှ ဂျီဟာဒ်လုပ်ရန်။
(၃) RSO နဲ့ဆက်သွယ်၍မြို့ကြီးများတွင် မြေအောက်အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းရန်။
(၄) OIC မှ မြန်မာအစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးဆောင်ရွက်ရန်။
မဟာဗျူဟာအမှတ် (၉)အတွက် နည်းဗျူဟာများ။
(၁) ဗမာလူမျိုးနှင့် တိုင်းရင်းသားများအကြား သွေးခွဲရန်။
(၂) ဘာသာခြား တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲများနှင့် ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ရန်။
(၃) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလည်း (၉၆၉)ကိစ္စနဲ့စပ်လျဉ်း၍ သွေးခွဲရန်။
(၄) ဦးဇင်းဂျောင်းဂျောင်းတို့လို မွတ်စလင်ဘက်မှ ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးထောက်လှမ်းသူများ အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
မဟာဗျူဟာအမှတ် (၁၀)အတွက် နည်းဗျူဟာများ။
(၁) အင်တာနက်ပေါ်တွင် မမှန်သတင်းများလွှင့်ရန်။
(၂) အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် အစ္စလာမ်ပြန့်ပွားရေး ဆောင်ရွက်ရန်။
(၃) ဘုန်းကြီးနှင့်မိန်းမအိပ်သည့် ဗွီဒီယိုများ များများဖြန့်ဝေရန်။
(၄) ဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်မှုအပေါ် ဒွိဟဖြစ်နိုင်စရာအချက်များ ရှာဖွေ၍ ရေးသားရန်။
မှတ်ချက်။ ။ဖြစ်နိုင်သည် မဖြစ်နိုင်သည်ကို မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့် စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါ။ တိုက်တွန်းချက်။ ။ရွှေမြန်မာများ သတိသာထားပေတော့။ မွတ်ဆလင်တို့၏ အကြံများလုပ်ရပ်များ ဘယ်လောက်အောက်တန်းကျတယ်, ယုတ်မာရက်စက်တယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် ရွှေမြန်မာများသည် မွတ်ဆလင်များနှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစသည် ဆက်ဆံရေးမလုပ်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အန္တရာယ် အကင်းဆုံးပါပဲ။ မွတ်စလင်အမှတ်တံဆိပ် (786, ၇၈၆, လခြမ်းနှင့်ကြယ်ပုံ, ဟာလာ) ဆိုင်များနှင့် ထုတ်ကုန်များကိုရှောင်ကျဉ်ပါ။ မဆိုင်သလို အသာနေရင်တော့ အသေနာကြပါလိမ့်မယ်။ လူယုတ်မာများကို လျစ်လျုရှု ဥပေက္ခာပြုခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ကလည်း ” အ သေဝနာ စ ဗာလာနံ လူယုတ်မာများနှင့်မပေါင်းသင်းမဆက်ဆံရ” လို့ ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်။ မေ့လျော့ပေါ့ဆခြင်းဟာ သေကြေပျက်စီးခြင်းရဲ့ အကြောင်းပါပဲ။ မပေါ့မဆ သတိဝီရိယနှင့်နေခြင်းဟာ အသက်ရှည်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ရွှေမြန်မာများအားလုံး မပေါ့မဆသတိဝီရိယနဲ့ နေနိုင်ကြပါစေ။
← “ရွှေသားဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် ပြန်လည်တွေ့ရမတော်တဆ”
Website APK ရယူရန်
မိမိဖုန်းမှ တဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ..။
Free Talking with this - Join Now!(Facebook account ဖြင့်ဝင်ရောက်ပြောကြားခဲ့နိုင်သည်) (LIVE Try Relay: the free SMS and picture text app for iPhone.)
ဆွေးနွေးလိုလျှင် Add ပေးပါ
Group Chat : myomyanmar@im.partych.at E-mail : myomyanmar1985@gmail.com
ဘာသာဝါဒ၊ မတူကြ၍၊ လောကအတွင်း
ငြင်းခုံခြင်းဖြင့်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ ရောက်ကြကုန်၏။
(၉) ဆရာစွဲဖြင့်၊ လွဲပုံစိတ်ချ၊
မယူကြလင့် ဒိဋ္ဌကျင့်ကြံ၊ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့်၊
ပြောဆိုပြုတတ်၊ ကြံစည်တတ်၊ သူမြတ်ပဏ္ဍိတံ။
စိတ်ဖြူ နှုတ်ဖြူ၊ အလုပ်ဖြူလျှင်၊
လူကြိုက်အများဆုံး Posts များ
ကျား ဘုရားကျောင်း (ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း)
အကြမ်းဖက်မှု နှင့် ကုရ်အာန်အား တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း
“ဝဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်”
IS တပ်သားသစ်များကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် အီရတ် ကျွန်ဈေးကွက်၌ အမျိုးသမီးများကို ၁၀ ဒေါ်လာဖြင့် ရောင်းချနေ
အစ်ဒ်နေ့၌ အလ္လာဟ်အား အသက်ပေး ပူဇော်ကြသူများ
သံဃာအရောင်ဆောင် မွတ်ဆလင်ကုလား ဖမ်းမိခြင်း
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ဖျက်သူများနှင့် ဖျက်ပုံများ
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားလိုက်တဲ့ “ကျေးကုလား မုိုးသီးဇွန် ဖတ်ရန်
ကျား ဘုရားကျောင်း (ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း) October 27, 2014
အကြမ်းဖက်မှု နှင့် ကုရ်အာန်အား တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း October 27, 2014
ကမ္ဘာ့ပညာရှင်တို့ မျက်လုံးထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာ October 20, 2014
“ဝဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်” October 10, 2014
IS တပ်သားသစ်များကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် အီရတ် ကျွန်ဈေးကွက်၌ အမျိုးသမီးများကို ၁၀ ဒေါ်လာဖြင့် ရောင်းချနေ October 10, 2014
အစ်ဒ်နေ့၌ အလ္လာဟ်အား အသက်ပေး ပူဇော်ကြသူများ October 10, 2014
ဝဋ်တွေလည်နေပြီ! October 10, 2014
သံဃာအရောင်ဆောင် မွတ်ဆလင်ကုလား ဖမ်းမိခြင်း September 24, 2014
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ဖျက်သူများနှင့် ဖျက်ပုံများ September 24, 2014
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားလိုက်တဲ့ “ကျေးကုလား မုိုးသီးဇွန် ဖတ်ရန် August 23, 2014
Like လုပ်ပေးပါခင်ဗျ (Facebook မှဖတ်လိုလျှင်)
Anti Rohingya 0
Arakan Coral News 0
FUN WITH MUMAMMAD 0
Prophet Muhammad(Pedophilia Be Upon Him) 0
ကိုရ်အာန် ကျမ်း Site 0
Buddha Sasana 0
M-Media Group 0
Follow မျိုးမြန်မာ on WordPress.com
Aisha Allah Allha Buddha Burma Ebola Virus Einstein Fake photos Genocide Golden buddha Hell human-rights ISIS Islam Islam Fraternal Society Islam is not justaReligion Jihad mildew Mohammed Myanmar OOREDOO Quram QURBANI Religion Rohingya (ရိုဟင်ဂျာ) Sahih Bukhari Sharia law Super New The Religion Of Peace Trojan Trojan Islam Yohingya ကကုသန်ဘုရား ကိုရမ် ကိုရမ်ကျမ်း ကိုရ်အာန်ကျမ်း ကိုရ်အံကျမ်း ကိုအံကျမ်း ကုရ်ဗါနီ ကုလား ကျိုက်ထီးရိုး ကျိုက်ထီးရိုး စေတီပုံတော် ဂျဟန္နမ်မီ ဂျီဟပ် ဂျန္နသ် (သုခဘုံ) ငရဲ ငရဲပြည် ဆွီဒင် ထူးခြားသတင်း ပါကစ္စတန် ဖတ်မိဖတ်ရာ ဗုဒ္ဒဘာသာ ဗုဒ္ဓ ဗုဒ္ဓစွယ်တော် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဘင်္ဂလာဒေ့ရ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာနိုင်ငံထက် GDP မြင့်ပါသတဲ့ ၊ ဘင်္ဂလီ ဘင်္ဂလီအရေး ဘာသာရေး ဘုရား ဘုရားလောင်း မရ်ယမ် မိုဟမ္မဒ် မုဟမ္မဒ် မွတ်စလင် မှို ရသစာပေ ရိုဟင်ဂျာ လ လက်နက် လှည်လှီးသတ်ခြင်း သတင်း သမိုင်းထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာစောင့်နတ်မင်းကြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သမိုင်း အစ္စလမ် အစ္စလမ်ဘာသာ အစ္စလမ်ဘာသာဆိုသည်မှာ အတုမရှိဗုဒ္ဓ အလ္လာဟ် အာဖရိက အိုင်စတိုင်း အိုင်စတိုင်း နှင့် ဗုဒ္ဓအယူဝါဒ အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ် အိုင်အေရှာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း အနောက်တိုင်းအမြင် ခေါင်းဖြတ်သတ် ခေါတောကုလား ဂေါတမ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ မြတ်ဗုဒ္ဓ မြန်မာ မြသပိတ် မြသပိတ်တော်